राष्ट्रपति तपाइलाइ कार्पेट फेर्न मन छ, हामीलाई रास्ट्रपती फेर्न मन छ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/राष्ट्रपति तपाइलाइ कार्पेट फेर्न मन छ, हामीलाई रास्ट्रपती फेर्न मन छ !
राष्ट्रपति तपाइलाइ कार्पेट फेर्न मन छ, हामीलाई रास्ट्रपती फेर्न मन छ !
त्यस यता वालुवाटारमा दिनहुँ प्रदर्शन जारी छ । प्रहरीले अश्रुग्यास देखि पानीको फोहरा हान्ने गरेको छ । तर प्रदर्शन रोकिनुको साटो झन अन्य शहरमा पनि फैलिएका छन् ।
यस अघिका प्रदर्शन भन्दा यो प्रर्शनमा फरक शैली देखिएको छ । यस अघिका प्रदर्शनमा युवाहरु सहभागी भएपनि ति ग्रामीण क्षेत्रका थिए । उनीहरुलाई नेताले आफै शहर र प्रदर्शन स्थलसम्म ल्याउने गरेका थिए ।
शुल्क नतिर्ने अभिभावकलाई छोराछोरी फिर्ता लैजान भन्दै ध’म्की !